Photo Editor Pro & Collage Maker အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် APK（19.2MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Photo Editor Pro & Collage Maker - Square Art
😀 Photo Editor Pro & Collage Maker - စတုရန်းအနုပညာသည် Square Art Square Square နှင့် Beaution Maker ကင်မရာကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောမိတ်ကပ်ဖျားနာခြင်းနှင့်လှပသည့် Pip Blur တို့အတွက်အကောင်းဆုံးလက်ငင်းအယ်ဒီတာဖြစ်သည်။ > ။
😀300သင့်အတွက်အံ့သြဖွယ်စတစ်ကာများ။ သင် Selfie ဓာတ်ပုံကိုthe💋 မိတ်ကပ်စတစ်ကာများ
ကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်၏မျက်လုံးများကိုကြည့်ရှုနိုင်ပြီးမျက်လုံးများစတစ်ကာများဖြင့်လက်များကိုချက်ချင်း ပြောင်းလဲ. သင်၏ဆံပင်အရောင်များကိုလွယ်ကူစွာပြောင်းလဲနိုင်သည်။ တိရိစ္ဆာန်မျက်နှာနှင့် ဦး ထုပ်နှင့်မျက်မှန်များနှင့်နှုတ်ခမ်းများကဲ့သို့ချစ်စရာကောင်းသောအလှအပမိတ်ကပ်စတစ်ကာများအမျိုးမျိုးရှိသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင်တက်တူးထိုးခြင်း,
😀squareအနုပညာသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော☺️ Pip Blur Effect
😘ကိုသင့်အတွက်ဖြစ်သည်။ အလှအပနှင့်မှော်နှင့်ပုလင်းနှင့်ပို့စကတ်။ သင့်အတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Pip Blur Blur Photo Editor ။
😀100သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စစ်ထုတ်စက်များသည်သင်၏ဓာတ်ပုံကို ပို. လှပစေသည်။ နယူးယောက် / အလှအပနှင့်ဆောင်းရာသီနှင့်နွေရာသီနှင့်နွေရာသီနှင့်နွေရာသီနှင့်သင့်ဓါတ်ပုံတွင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့စစ်ထုတ်ကိရိယာများကိုထည့်ပါ။
😀photoအယ်ဒီတာ Pro & Collage Maker - စတုရန်း 300 စတုရန်းနှင့်အတူစတုရန်းအနုပညာ။ abds နှင့် color tatters နှင့်b& w tatters နှင့်တိရိစ္ဆာန်မျက်နှာများကဲ့သို့။ ရယ်စရာစတစ်ကာများကိုသင်၏ဓာတ်ပုံပေါ်တွင်သုံးပါ။
😀photoအယ်ဒီတာ Pro & Collage Maker - Square Art သည် Instagram အတွက်
Blur Blur နောက်ခံနှင့်အရောင်နောက်ခံ
ဖြင့်စတုရန်းဖြစ်သည်။ သင်၏ဓါတ်ပုံများအတွက်စတစ်ကာများကိုထည့်နိုင်သည်။ သင့်အတွက်များစွာသောရယ်စရာ Emojis ။
> အယ်ဒီတာ Pro & Collage Maker - စတုရန်းအနုပညာ
သည်သင်၏ pics များကိုပိုမိုထူးခြားစေရန်
ကိုပေးလိမ့်မည်။ Instasquare Art နှင့်အတူသင်၏ဓါတ်ပုံများကိုလူကြိုက်များစေရန်သင်၏ဓါတ်ပုံများကိုချက်ချင်းတည်းဖြတ်နိုင်သည်။
ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ရေးရှင် Pro & Collage Maker - Square Art
သင်၏ဓါတ်ပုံများအတွက် Snap ကိုထည့်နိုင်သည်။ Snap နှင့်စတစ်ကာများကိုအတူတကွပေါင်းထည့်ပြီး Facebook နှင့် Instagram အတွက် Snap Photo ကိုမျှဝေပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သင်သည်သင်၏ Snap Photo အတွက် Blur Blur နောက်ခံလုပ်နိုင်ပါတယ်။
😀 Photo Editor Pro & Collage Maker - စတုရန်းအနုပညာ
က 1-9 ဓာတ်ပုံများကိုအတူတကွပေါင်းစပ်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ သင့်အတွက် Collage တင်းပလိတ် 100 ရှိပါတယ်။ သင်၏ဓါတ်ပုံများကိုအတူတကွ စုစည်း. အတွင်းပိုင်းနှင့် conner ကိုညှိနိုင်သည်။ အကောင်းဆုံး Collage ထုတ်လုပ်သူဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ သင်၏သူငယ်ချင်းများအတွက်ပုံရိပ်များကိုမျှဝေပါ။
Snappic function ကိုအလွန်လူကြိုက်များသည်။ သင်စာသားနှင့် emojis ထည့်နိုင်သည်။ သငျသညျ snap ဖယ်ရှားပစ်ရန်ရှည်လျား couch နိုင်ပါတယ်။ အကယ်. သင်သည်ပိုမိုအာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်ချီးမွမ်းခြင်းကိုနှစ်သက်ပါကဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်သူ Pro & Collage Maker - စတုရန်းအနုပညာကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။
collage 1-9 ဓာတ်ပုံ Collage:
collage collage) ။ သင့်အတွက် Collage တင်းပလိတ် 100 ။
> 100 နောက်ခံ
📌 ~ 📌📌📌📌 filters
📌📌📌 ~ သင်၏လှပသောဓါတ်ပုံများကို Instagram Facebook Twitter သို့ဝေမျှပါ။
ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်သူ Pro & Collage Maker - စတုရန်းအနုပညာ
သည်သင်၏ Instagram အတွက် snappic နှင့် pip ဓာတ်ပုံများကိုမျှဝေခြင်းမရှိဘဲစတုရန်းကိုမျှဝေရန် Pic အယ်ဒီတာဖြစ်သည်။
ဘာအသစ်လဲ Photo Editor Pro & Collage Maker - Square Art 3.22
Create Heart Shaped Collage easily with Shape Collage Maker Phinsh
Photo Editor Pro & Collage Maker - Square Art 3.20
Photo Editor Pro & Collage Maker - Square Art 3.12
Photo Editor Pro & Collage Maker - Square Art 3.11
Thet Lay Thet Lay